ကိုပါအမရေိက ဗိုလျလုပှဲမှာ မကျဆီနဲ့ နမော ဘယျသူခွပေိုစှာနိုငျမှာလဲ – Sports A2Z
လီယှနျနယျ မကျဆီနဲ့ နမောတို့က ၂၀၂၁ ကိုပါအမရေိကပွိုငျပှဲမှာတော့ ဘယျသူ့လောငျးရိပျအောကျမှာမှ မရှိတဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမားတှဆေိုတာ ငွငျးမရပါဘူး။ ဒီတောငျအမရေိက မှျောဆရာတှကေ သကျဆိုငျရာနိုငျငံတှမှော မရှိမဖွဈတှေ ဖွဈနပွေီးတော့ နိုငျငံအတှကျ ကိုပါအမရေိကဖလားကို အရယူပေးဖို့ တဈပှဲသာ အနိုငျရဖို့ ကနျြပါ‌တော့တယျ။
လီယှနျနယျ မကျဆီနဲ့ နမောတို့က အလှနျကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျဆံရေးတှေ ရှိကွသူတှလေညျးဖွဈပွီး နိုငျငံလကျရှေးစငျ အသငျးအနနေဲ့တော့ မကွာခဏ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျနရေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး သူတို့နှဈယောကျက ၂၀၂၁ ကိုပါအမရေိကဖလားရဲ့ ဗိုလျလုပှဲမှာ တောငျအမရေိကရဲ့ အရှငျသခငျဖွဈဖို့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ရမယျ့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပွနျပါတယျ။
မကျဆီနဲ့ နမောတို့က လကျရှိမှာ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျး‌အတှကျ အတျောခရီးရောကျခဲ့သလို သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး စံခြိနျတှကေိုခြိုးဖို့ ဖွဈနိုငျခွမြေားလာပါတယျ။ အာဂငျြတိုငျးသားကွီးက နိုငျငံလကျရှေးစငျ သှငျးဂိုး ၇၆ ဂိုးအထိ သှငျးယူထားသလို ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ပီလီသှငျးယူထားတဲ့ ၇၇ ဂိုးဆိုတဲ့ အရအေတှကျကို ကြျောဖွတျဖို့ နီးစပျနပေါတယျ။
နမောကလညျး သိပျဝေးကှာလှတဲ့‌အနအေထားတော့ မဟုတျဘဲ ၆၈ ဂိုး သှငျးယူထားနိုငျတာကွောငျ့ လကျရှိပုံစံသာ ဆကျထိနျးနိုငျမယျဆို မကျဆီတငျမယျ့ စံခြိနျကိုပါ ခြိုးဖကျြနိုငျမှာပါ။ ဘရာဇီးလျသမိုငျးမှာလညျး ဖနျတီးမှုအမြားဆုံးအနနေဲ့ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ၄၉ ဂိုးအထိ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာပါ။
၆ ပှဲပဲကစားရသေးခြိနျမှာ မကျဆီက ၄ ဂိုးသှငျးထားပွီး ၅ ဂိုး ဖနျတီးပေးထားနိုငျတာကွောငျ့လညျး ၂၀၂၁ ကိုပါအမရေိကရဲ့ လကျရှိ အကောငျးဆုံးကစားသမား ဖွဈနပေါတယျ။ ပွိုငျပှဲအတှငျး ပွဈဒဏျဘောကနလေညျး တိုကျရိုကျ ၂ ဂိုး သှငျးယူထားနိုငျတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးပုံစံကို ပွထားနိုငျတယျလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
နမောကလညျး ဘရာဇီးလျအတှကျ အထငျကွီးစရာ စှမျးဆောငျရညျတှကေို ပွနပွေီး လကျရှိ ပွိုငျပှဲအတှငျး ၅ ပှဲ မှာ ၂ ဂိုးသှငျး၊ ၃ ဂိုး ဖနျတီးပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈမှူးအနနေဲ့ နောကျဆုံး ၃ ပှဲဆကျတိုကျ ဂိုးပေါကျပြောကျနတော ဖွဈပမေယျ့ အခြိနျတိုငျး ဂိုးသှငျးနိုငျခွရှေိတဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့လညျး သိပျတော့ မစိုးရိမျရတဲ့ အနအေထားပါ။
နမောရဲ့ အကောငျးဆုံးအခြိနျတှမှောတောငျ မကျဆီရဲ့ ကှငျးတှငျး စှမျးဆောငျရညျက ဘရာဇီးလျသားကို ပွငျသဈမွအေရောကျ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ထိ ကောငျးမှနျခဲ့တာပါ။ အသကျ ၃၄ နှဈရှိနတေဲ့အထိ အာဂငျြတိုငျးသားကွီးရဲ့ လကျရှိခွစှေမျးက ကဆြငျးသှားတာမြိုး မရှိသေးဘဲ သူ့ရဲ့ ၇ ကွိမျမွောကျ ဘယျလှနျဒေါဆုကို အရယူဖို့ ရှကေ့နေ ရပေနျးစားနတောက တကယျကို ထူးခွားပါတယျ။
၂၀၂၁ ကိုပါအမရေိကဖလားကို အရယူမှာက မကျဆီလား? နမောလား? ဆိုတာကတော့…..
ZAWGYI: လီယွန်နယ် မက်ဆီနဲ့ နေမာတို့က ၂၀၂၁ ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဘယ်သူ့လောင်းရိပ်အောက်မှာမှ မရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒီတောင်အမေရိက မှော်ဆရာတွေက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ မရှိမဖြစ်တွေ ဖြစ်နေပြီးတော့ နိုင်ငံအတွက် ကိုပါအမေရိကဖလားကို အရယူပေးဖို့ တစ်ပွဲသာ အနိုင်ရဖို့ ကျန်ပါ‌တော့တယ်။
လီယွန်နယ် မက်ဆီနဲ့ နေမာတို့က အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိကြသူတွေလည်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံလက်ရွေးစင် အသင်းအနေနဲ့တော့ မကြာခဏ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း သူတို့နှစ်ယောက်က ၂၀၂၁ ကိုပါအမေရိကဖလားရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ တောင်အမေရိကရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်ဖို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရမယ့် အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
မက်ဆီနဲ့ နေမာတို့က လက်ရှိမှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်း‌အတွက် အတော်ခရီးရောက်ခဲ့သလို သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စံချိန်တွေကိုချိုးဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါတယ်။ အာဂျင်တိုင်းသားကြီးက နိုင်ငံလက်ရွေးစင် သွင်းဂိုး ၇၆ ဂိုးအထိ သွင်းယူထားသလို ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင် ပီလီသွင်းယူထားတဲ့ ၇၇ ဂိုးဆိုတဲ့ အရေအတွက်ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ နီးစပ်နေပါတယ်။
နေမာကလည်း သိပ်ဝေးကွာလှတဲ့‌အနေအထားတော့ မဟုတ်ဘဲ ၆၈ ဂိုး သွင်းယူထားနိုင်တာကြောင့် လက်ရှိပုံစံသာ ဆက်ထိန်းနိုင်မယ်ဆို မက်ဆီတင်မယ့် စံချိန်ကိုပါ ချိုးဖျက်နိုင်မှာပါ။ ဘရာဇီးလ်သမိုင်းမှာလည်း ဖန်တီးမှုအများဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ၄၉ ဂိုးအထိ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။
၆ ပွဲပဲကစားရသေးချိန်မှာ မက်ဆီက ၄ ဂိုးသွင်းထားပြီး ၅ ဂိုး ဖန်တီးပေးထားနိုင်တာကြောင့်လည်း ၂၀၂၁ ကိုပါအမေရိကရဲ့ လက်ရှိ အကောင်းဆုံးကစားသမား ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအတွင်း ပြစ်ဒဏ်ဘောကနေလည်း တိုက်ရိုက် ၂ ဂိုး သွင်းယူထားနိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပြထားနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
နေမာကလည်း ဘရာဇီးလ်အတွက် အထင်ကြီးစရာ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပြနေပြီး လက်ရှိ ပြိုင်ပွဲအတွင်း ၅ ပွဲ မှာ ၂ ဂိုးသွင်း၊ ၃ ဂိုး ဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူးအနေနဲ့ နောက်ဆုံး ၃ ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာ ဖြစ်ပေမယ့် အချိန်တိုင်း ဂိုးသွင်းနိုင်ခြေရှိတဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့်လည်း သိပ်တော့ မစိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားပါ။
နေမာရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာတောင် မက်ဆီရဲ့ ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်က ဘရာဇီးလ်သားကို ပြင်သစ်မြေအရောက် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ထိ ကောင်းမွန်ခဲ့တာပါ။ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိနေတဲ့အထိ အာဂျင်တိုင်းသားကြီးရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းက ကျဆင်းသွားတာမျိုး မရှိသေးဘဲ သူ့ရဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို အရယူဖို့ ရှေ့ကနေ ရေပန်းစားနေတာက တကယ်ကို ထူးခြားပါတယ်။
၂၀၂၁ ကိုပါအမေရိကဖလားကို အရယူမှာက မက်ဆီလား? နေမာလား? ဆိုတာကတော့…..